Daaficii Hore Ee Liverpool Oo Fariin U Diray Jurgen Klopp Ka Hor Suuqa Kala Iibsiga Bisha Janaayo
Home Horyaalka Ingiriiska Daaficii hore ee Liverpool oo fariin u diray Jurgen Klopp ka hor...
Jamie Carragher ayaa ku adkeysanaya in kooxdiisii ​​hore ee Liverpool ay tahay inay ku darto daafac dhexe marka suuqa kala iibsiga dib loo furi doono bisha Janaayo.
Joel Matip ayaa lagu qasbay inuu dhaawac kaga baxo qeybtii labaad ee kulankii Merseyside Reds ee ay barbaraha 1-1 la galeen West Bromwich Albion Axadii, iyadoo Jurgen Klopp uusan heysan fursado uu ku xoojiyo daafaca kadib dhaawacyadii Joe Gomez iyo Virgil van Dijk.
Tababaraha Jarmalka ayaa laga yaabaa inuu ku tiirsanaado da ‘yarta Rhys Williams iyo Sepp van den Berg Nat Phillips, muddo gaaban, si kastaba ha ahaatee, xiddigii hore ee Liverpool Carragher ayaa aaminsan in Klopp ay tahay inuu iibsado bisha soo socota haddii ay doonayaan inay difaacdaan horyaalka Premier League.
Waa walaac weyn laakiin ma ahan walaac cusub. Taasi waa sababta ay muhiimad weyn u leedahay Liverpool inay lasoo saxiixato qof bisha Janaayo, ”ayuu Carragher u sheegay Sky Sports News.
“Waxaan dhahay isla markii uu Virgil van Dijk dhaawacmay. Fabinho wuxuu umuuqday inuu yahay daafac dhexe oo heer sare ah, laakiin Matip kaliya dhaawac aad ayuu u nugul yahay. Jidhkiisu kaliya ma qaadan karo adkaanta ka ciyaarista Premier League usbuuca dhexdiisa.
“Weli waxaan aaminsanahay in Liverpool ay tahay kooxda ugu fiican horyaalka xitaa la’aanta Van Dijk. Dariiqa kaliya ee aysan ku guuleysan ayaa ah hadii ay dhibaato ku qabaan daafaca dhexe halkaasoo Rhys Williams ama Nat Phillips ay ku ciyaarayaan muddo dheer.
Ma ahan boos ciyaartooyda ‘yar. Waqtiyada qaarkood way khaldami doonaan maxaa yeelay waa da ‘yar yihiin oo waxbaranayaan.
Previous articleLiverpool oo ku soo biirtay tartanka loogu jiro weeraryahanka aadka loo qiimeeyo ee reer England
Next articleWararka Suuqa kala iisbiga kuwooda ugu muhiimsan ee Caawa: Cavani oo Qandaraaska loo kordhinayo iyo Qodobo kale